Macluumaadka Bukaanada Ka Yar 18 - Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Kaniisadda Falls
Macluumaad loogu talagalay Bukaannadeena 18 sano ka yar
Waxaa jira dhowr talaabo oo kale oo bukaan socodka ka yar 18 sano u baahan yahay inuu qaado si loo helo daryeelka ilmo iska soo ridka. Fadlan xor ayaad u tahay inaad naga soo wacdo lambarka 703-532-2500 oo aad weydiisato inaad la hadasho bare caafimaad. Way kugula socon karaan adiga oo ka jawaabaya wixii su'aalo ah ee aad qabtid.
Su'aalo & Jawaabo Haddaan ka yarahay 18
“Hooyo, Aabe, Waan Uur Leeyahay” - ilaha dhalinyarada iyo waalidkood
Su'aalo & Jawaabo Haddii aan ka yarahay 18:
Waxaan soo jeedinaynaa in dib loo eego ilaha soo socda:
“Hooyo, Aabe, Waan Uur Leeyahay”
Tilmaanta dhalinyarada: Sideen ugu sheegi karaa waalidkay? (Español)
Tusmada Waalidiinta: Sideen uga jawaabaa? (Español)